Cusboonaysiinta: Dhacdada Dugsiga Dhexe ee Plymouth | maqaalka
Cusboonaysiinta: Dhacdada Dugsiga Dhexe ee Plymouth
Abriil 26 2021
Abriil 26, 2021
Qoysaska Qaaliga ah Dugsiyada Aagga Robbinsdale,
Waxaan uqorayaa inaan kuugu wargaliyo dhacdo culus oo kadhacday Dugsiga Dhexe ee Plymouth maanta. Subaxnimadii maanta, arday ayaa u keenay iskuulka qori yar oo la soo raray, ka dibna wuxuu ku dhuftay rasaas badan xadka saqafka sare.
Nasiib wanaag, qofna kuma dhaawacmin, inkasta oo tiro dad ah ay goobjoog u ahaayeen dhacdada, oo ay ku jiraan ardayda. Waqtigaan, dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba way nabad qabaan, mana jirto khatar dheeraad ah oo ku soo food leh qofna dugsiga.
Maamulayaasha Dugsiga Dhexe ee Plymouth iyo booliska ayaa isla markiiba ka jawaabay dhacdada, iskuulkiina wuxuu galay quful. Ardaygii hubka riday ayaa si deg deg ah oo aan dhib kale u dhicin gacanta loogu dhigay booliska. Waxaa joogi doona joogitaan boolis oo muuqda Dugsiga Dhexe ee Plymouth inta ka hartay maalinta, dugsiguna wuxuu kusii jiri doonaa qufulka inta lagu jiro waqtigaas. Ma jirin wax khatar ah oo ku soo food saartay iskuul kale oo degmo ah, mana jirin dugsi kale oo quful ku xirmay.
Degmadeennu waxay u qaadataa dhacdo kasta oo la xiriirta hub si dhab ah. Waxaan la shaqeyneynaa sharci fulinta sidoo kale waxaan sameyneynaa baaritaankeena.
Waxaan raaci doonaa tilmaamaha anshax ee ku habboon sida ku cad bogga 20 ee Buugga Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha Ardayda . Inta hawshaas socoto, waxaa nalagu xadidi doonaa macluumaadka aan la wadaagi karno edbinta qaaska ah sababo la xiriira sharciyada asturnaanta xogta gobolka.
Waan ognahay inay tani ahayd dhacdo cabsi iyo naxdin leh oo ku dhacday qof walba oo ku sugan Dugsiga Dhexe ee Plymouth, iyo guud ahaan degmada. Fadlan ogow in dugsi kasta oo degmo leeyahay koox taageero ah oo ay ku jiraan la-taliyayaasha dugsiga, cilmu-nafsiga iskuulka, shaqaalaha bulshada iyo kuwa kale oo diyaar u ah inay la shaqeeyaan ardayda markay la qabsanayaan waxyaabaha ay dareemayaan iyo waxay la kulmayaan dhacdadan awgeed.
Ugu dambeyntiina, markay tahay waqtiga saxda ah, fadlan waqti yar si aad ugala hadasho ardaygaaga nabadgelyada dugsiga. Waa muhiim in ardaydu fahmaan muhiimadda ay leedahay in si dhakhso leh loogu wargeliyo qof qaangaar ah shaqaalaha xaaladaha aan ammaan ahayn.
Waad ku mahadsan tahay fahamkaaga iyo taageeradaada sida aan ugu dadaalleyno inaan siino jawi waxbarasho oo badbaado leh oo wax soo saar leh dhammaan ardaydeena iyo shaqaalaheena.
Kormeere Ku-meelgaar ah
Dugsiyada Robbinsdale Area